White Vision မော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
Lego 71031 Marvel စတူဒီယိုများသည် Vision standoff အတွက်တံခါးများဖွင့်ပေးသည်
06 / 09 / 2021 07 / 09 / 2021 Rachael ဒေးဗီးစ် 101 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, LEGO Group, LEGO.com, Marvel, MCU, စကခ, အဆိုပါ LEGO Group, ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ, WandaVision, အဖြူရောင်အမြင်
LEGO 71031 မှ White Vision ကိုတွဲချိတ်သည် Marvel သူ့ကိုယ်သူဗားရှင်းအဟောင်းရှိတဲ့စတူဒီယိုတစ်ခုကမင်းကိုပြန်လည်ဖန်တီးနိုင်ရမယ်
18 / 08 / 2021 01 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 403 Views စာ0မှတ်ချက် 60302 တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးစစ်ဆင်ရေး, 71026 DC စူပါသူရဲကောင်းများစုဆောင်းထားသောအသေးစား, 71031 Marvel စတူဒီယို, 76021 Milano အာကာသယာဉ်အားကယ်ဆယ်ရေး, 76107 Thanos Ultimate စစ်တိုက်, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, 76237 Sanctuary II ကို, မိကျောင်း Loki, Black က Panther, Bucky ကျီများ, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, City, Clone Trooper ဖြစ်သည်, ကော်ဖီခွက်, စုဆောင်း Minifigures, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, အီစတာကွကျဥ, ဖါး, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, ရဟတ်ယာဉ်, Lady Loki, Lego, Lego CIty, LEGO CMFs များ, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Marvel စတူဒီယို, Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, Lego Minecraft, Lego Minifigures, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego သုံးသပ်ချက်များ, Lego Spider-Man, Lego Star Wars, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Minecraft, အသေးစား, သေးသေးလေး, မော်နီကာရက်ဘို, ဆန်းစစ်ခြင်း, reviews, ဆမ် Wilson, Spider-Man, Star Wars, စတား-သခင်ဘုရား, streaming များ, superhero, Superheros တွေက, ဓားကို, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, အဆိုပါ Marvels, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, Throg, အချိန်ကှဲလှဲအာဏာပိုင်, T'Challa စတား - Lord, ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ, Wanda, ဝမ် Maximoff, WandaVision, အဖြူရောင်အမြင်, ဆောင်းရာသီ Soldier, ဖုတ်ကောင်, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey, ဖုတ်ကောင်
LEGO သည် Vision ၏ဒီဇိုင်းကို 71031 တွင်ရှင်းပြသည် Marvel စုဆောင်းထားသော Minifigures စတူဒီယို
26 / 07 / 2021 26 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 451 Views စာ0မှတ်ချက် စုဆောင်းထားသောအသေးစား, ဝါသနာရှင်မီဒီယာနေ့များ 2021, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego ဝါသနာရှင်မီဒီယာ, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Loki, Mark Tranter ပါ, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, သေးသေးလေး, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Wanda, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, အဖြူရောင်အမြင်
LEGO Minifigures အဖွဲ့ကပြောကြားလိုက်သည်မှာ Vision သည်အသစ်ပေါ်ထွန်းခဲ့သော 71031 အတွက်အလွန်တင်းကျပ်သောဒီဇိုင်းစည်းမျဉ်းကိုလိုက်နာရမည်ဖြစ်သည် Marvel
LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယိုကိုတရားဝင်ဖော်ပြခဲ့သည်
26 / 07 / 2021 26 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 3807 Views စာ0မှတ်ချက် 71030 Looney တီးလုံး, Bucky ကျီများ, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Lego စတိုးဆိုင်များ, LEGO.com, Loki, Marvel, သေးသေးလေး, မော်နီကာရက်ဘို, Spider-Man, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Wanda, WandaVision, အဖြူရောင်အမြင်
အဆိုပါ LEGO Group နောက်ဆုံးတွင်နှစ်ရှည်လများကောလာဟလသတင်းများအရ Collectible Minifigures စီးရီး 71031 ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် Marvel ဒီကနေဇာတ်ကောင် 12 ပါဝင်သောစတူဒီယို
Lego ကောလာဟလ Marvel Collectible Minifigures လိုင်း -up, ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်
09 / 07 / 2021 09 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 711 Views စာ0မှတ်ချက် 76178 နေ့စဉ် Bugle, Avengers, Bucky ကျီများ, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego ကောလာဟလများ, Lego Spider-Man, Loki, Marvel, Peter Quill, ကောလာဟလာ, Scarlet စုန်းမ, Spider-Man, ကြယ်စင်သခင်, Sylvie, Thanos, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, အဆိုပါ LEGO Group, Throg, ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ, Wanda, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, အဖြူရောင်အမြင်
ယခုကျွန်ုပ်တို့ကောလဟာလ LEGO တွင်အက္ခရာ ၁၂ လုံးလုံးအတွက်အရင်းအမြစ်အကြောင်းအရာရှိသည် Marvel စုဆောင်းနိုင်သော Minifigures စီးရီး၊
23 / 04 / 2021 23 / 04 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 807 Views စာ0မှတ်ချက် Bucky ကျီများ, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဗြိတိန်, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney, Disney+, Gamora, Lady Loki, Lego, Lego မှ marvel, Lego ကောလာဟလများ, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, မော်နီကာရက်ဘို, ကောလာဟလာ, ကောလာဟလများ, ဆမ် Wilson, Scarlet စုန်းမ, Spider-Man, စတား-သခင်ဘုရား, စွန်ငှက်, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, အဆိုပါဆောင်းရာသီ Soldier, Throg, ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, အဖြူရောင်အမြင်, ဝှိုက်ဖြူ, ဆောင်းရာသီ Soldier, ဖုတ်ကောင်, ဖုတ်ကောင်
တစ် ဦး ထင် LEGO များအတွက်ကောလာဟလများနှင့်အတူ Marvel အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ပေါ်ထွက်လာနိုင်သောစုဆောင်းနိုင်သော Minifigures စီးရီးသင်ဇာတ်ကောင်များမည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုသင်သိလိုပေမည်။
Lego အတွက်ဇာတ်ကောင်စာရင်းအပြည့်အစုံ Marvel စုဆောင်းထားသော Minifigures စီးရီး
20 / 04 / 2021 20 / 04 / 2021 ခရစ် Wharfe 1036 Views စာ0မှတ်ချက် Bucky ကျီများ, Captain America, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Gamora, Instagram ကို, Lady Loki, Lego, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego ကောလာဟလများ, Loki, Marvel, သေးသေးလေး, မော်နီကာရက်ဘို, ကောလာဟလာ, ဆမ် Wilson, Scarlet စုန်းမ, Spider-Man, စတား-သခင်ဘုရား, စတိဗ်ရော်ဂျာ, T'Challa, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Throg, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, အဖြူရောင်အမြင်
LEGO တွင်ပါ ၀ င်သည့်ပထမဆုံးကောလာဟလများစာရင်း Marvel Collectible Minifigures သည်အွန်လိုင်းပေါ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်